देश विदेशमा वीपी स्मृति दिवस मनाइंदै न्यूयोर्क,अमेरिका,जुलाई १९। नेपाली कांग्रेसले पार्टीका संस्थापक महामानव विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको ३८ औं स्मृति दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउने भएको छ। साउन ६ गते वीपी स्मृति दिवसको मूख्य दिन हो। २०३९ साउन ६ गते नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेसका संस्थापक कोइरालाको देहवसान भएको थियो। आफ्ना पार्टीका संस्थापक...
सरकार महामारी नियन्त्रण गर्न पूर्णरुपले चुकेको छ,जनता आश्वस्त हुने कुनै योजना आएन काठमाडौं, जेठ ४। प्रमूख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि कडा टिप्पणी गरेका छन्। सरकारले पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बारे आज संसदमा सम्बोधन गर्दै देउवाले 'सरकारलाई जनताको दूःखप्रति कुनै वेदना छैन र जनताको पीडा बुझ्न सक्ने हृदय छैन' रहेछ भन्दै सरकारी नीति...
जन्मियो जनता समाजवादी पार्टी बैशाख १०, काठमाडौं । सरकारले पार्टी फुटाउन सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याएको भनेर चौतर्फी आलोचना भै रहँदा दुई पार्टीका बीचमा एकीकरण भएको छ । बुधवार राती समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच पार्टी एकताको सहमति भएको हो । एकीकृत पार्टीको नाम जनता समाजवादी पार्टी नेपाल राखिएको छ । दुई पार्टीका नेताहरुबीच चार बुंदे सहमतिसहित पार्टी एकता भएको हो...
अध्यादेश संविधानका लागि अशुभ काठमाडौं,बैशाख ९ । नेपाली कांग्रेसले सरकारले जारी गरेको दुई अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । कांग्रेस पदाधिकारीको आज बसेको बैठकले अध्यादेश लोकतान्त्रिक संविधानका लागि अशुभ संकेत भन्दै फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो । सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानिलकण्ठमा बसेको बैठकले कोरोनाको संक्रमणका विरुद्ध सिंगो देश...
ऐक्यवद्ध ढंगले निरन्तर काम गर्न देउवाको अपील न्यूयोर्क,अमेरिका,अप्रिल १० । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोरोना भाइरसको महामारीको बढ्दो संक्रमणको चुनौती सामना गर्न विश्वभरका नेपालीहरुलाई अपील गरेका छन् । कांग्रेसको विदेशस्थित भातृ संगठन नेपाली जनसम्पर्क समितिका सबै देशका सभापतिहरुलाई एक पत्र पठाई सभापति देउवाले सम्पर्क समितिमार्फत...
कांग्रेसले बनायो कोरोना परीक्षणको एप काठमाडौं,चैत्र २५ । नेपाली कांग्रेसले कोरोना परीक्षणका लागि स्व-परीक्षण वेब एप सार्वजनिक गरेको छ । विशेषज्ञ चिकित्सकहरुको परामर्शमा पार्टीको सूचना, संचार तथा प्रचार विभागले वेब एप जारी गरेको पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जनाएका छन् । यो एपले कोरोनाको लक्षण रहे/नरहेको आफैंले परीक्षण गर्न सकिनेछ । सेन्टर फर डेमोक्रेटिक...
के निर्णय गर्यो कांग्रेस बैठकले ? काठमाडौं,मंसीर २६ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय विभागहरुको संख्या २८ बाट बढाएर अब ४१ पुर्याइने भएको छ । विद्यमान विधानमा विभिन्न २८ विभागको व्यवस्था छ । तर बिहीवारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले विभागहरुको संख्या थप गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । कांग्रेस विधानमा केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यकताअनुसार...
यस्ता छन् सभापति देउवाले प्रस्ताव गरेका विभागहरु काठमाडौँ,मंसीर २६ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसको विभाग थप गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । गत महासमिति बैठकले २८ वटा मात्र विभाग गठन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । तर सभापति देउवाले जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा विभागहरुको संख्या ४२ पुर्याउने प्रस्ताव गरेका छन् । देउवाले प्रस्ताव गरेका थप विभागहरुको सूची यस्तो छ: १. सङ्गठन...
हो,मलाई प्रधानमन्त्री बन्न हतारो छ, के मैले प्रधानमन्त्री बन्नु हुँदैन र ? काठमाडौं, मंसीर २१। नेपाली राजनीतिमा वामदेव गौतमलाई एक हक्की र निडर स्वभावका नेताका रुपमा लिइन्छ । विगतमा माओवादीसंगको सामिप्यता वा पार्टी एकता वा पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्षका विभिन्न मोडमा नेता गौतमले निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । नेता गौतम अहिले नेकपामा प्रस्तावित उपाध्यक्ष हुन् । उनलाई आफ्नो पक्षमा राखिराख्न...
सबै कर्मचारी खराब छैनन्,खराब जति नेताको नजिक छन् काठमाडौं,मंसीर २१ । सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कर्मचारीतन्त्रका कारण मुलुकमा संघीयता धरापमा परेको र कर्मचारीले नेताहरुको दिमाख खराब गरेको आरोप लगाएको भोलिपल्ट नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले उनलाई कडा जवाफ दिएका छन् । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा अतिक्रमण प्रकरणको तथ्य बाहिर ल्याउन आँट...
अन्तरघातीलाई कारवाही हुन्छ काठमाडौँ,मंसीर २१ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीमा अन्तर्घात गर्नेहरुलाई कारवाही गर्ने बताएका छन् । आज भैरहवामा आयोजित पार्टी नगर समितिको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले अन्तर्घात गर्नेहरुलाई कारवाही नगरेसम्म पार्टीमा अराजकता मौलाउने भन्दै पार्टीभित्रैबाट विद्रोही उम्मेदवार बन्ने, विद्रोही...